China Radio Shuttle orinasa sy mpanamboatra |Ampahafantaro
1 Miditra tokana mandeha ho azy Manaiky ny toromarika miditra, ny shuttle dia manainga entana amin'ny faran'ny fidirana ary mametraka izany amin'ny toerana banga ary miverina.
2 Mivoaka mandeha ho azy tokana Aorian'ny fanekena ny toromarika mivoaka, ny shuttle dia mitondra ho azy ny pallet voatahiry amin'ny lalana mankany amin'ny fivoahana na mpitatitra.
3 Mitohy miditra sy
Mivoaka Ho an'ny asa mitohy miditra sy mivoaka amin'ny batch dia azo apetraka amin'ny fanaraha-maso lavitra, finday na
Tablet PC (tsy voatery) amin'ny fotoana iray, ary ny asa miditra sy mivoaka mitohy dia azo tanterahina amin'ny tsindry iray.
4 Hanova ho azy ny lafiny A/B Afaka mifidy entana amin'ny lafiny roa amin'ny lalana ny shuttle, tsy mila manitsy ny orientation.
5 Pallet compatibility Ny shuttle dia mety hifanaraka amin'ny pallets amin'ny modely samihafa, azafady apetraho mialoha alohan'ny handehanana amin'ny fidirana amin'ny lalana.
6 Tally mode Ny Shuttle dia manaiky toromarika, mitondra pallet ho azy amin'ny lalana tsirairay mankany amin'ny farany mivoaka ary mandamina.
7 fomba fanisana Manisa ho azy ny isan'ny lalana's pallet, ary manisa ho azy isan'andro ny totalin'ny inbound sy outbound pallets.
8 Fitantanana angovo - Fanaraha-maso ny tokonam-baravarana herinaratra marobe, miverina manomboka ny tranokala aorian'ny asa ankehitriny miaraka amin'ny fanoloana raha toa ka ambany ny bateria.
- Amin'ny toe-javatra manokana, ny shuttle dia azo alefa any ivelan'ny tsipika tampoka.
- Mitsara tena sy manefa tena an-tserasera (amin'ny fampandehanana mandeha ho azy tanteraka)
9 Fanaraha-maso lavitra maro an'isa Afaka mandeha amin'ny alalan'ny fanaraha-maso lavitra iray ny fiara fitaterana maromaro.
10 Mitadiava fiara fitaterana Tsindrio ny bokotra iray amin'ny fanaraha-maso lavitra mba hitadiavana fiara fitaterana ary atosiky ny feo sy ny hazavana.
11 Tsarovy amin'ny tanana Avereno amin'ny tanana ny toerana voalohany, amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso lavitra, finday na Tablet PC (tsy voatery), torolàlana momba ny rafitra
12 Ny fitempon'ny fo miasa Mifandraisa amin'ny fampiantranoana rafitra fanaraha-maso ny solosaina amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny fisavana ny fitempon'ny fo mba hitsapana ny sata an-tserasera (automatique feno ihany).
13 Fijanonana vonjy maika Famantarana vonjy taitra alefa lavitra rehefa vonjy maika, ary mijanona avy hatrany ny fiara fitaterana mandra-pialana vonjy maika.
14 Fampiasa lavitra Izy io dia afaka manavao sy misintona programa avy lavitra (Ao amin'ny tambajotra Wi-Fi).
15 Fanaraha-maso ny rafitra Fanaraha-maso ny angona rafitra amin'ny fotoana tena izy, ary mampiakatra fanairana amin'ny feo sy hazavana amin'ny toe-javatra tsy ara-dalàna.
◆Miantoka ny fiarovana
Raha ampitahaina amin'ny racking drive-in, ny rafitra dia stable kokoa.Miasa amin'ny fanaraha-maso lavitra na WCS, tsy ilaina ny mitondra fiara ao amin'ny rack sy ny fampihenana ny fifandonan'ny racking.Hatsarao ny famokarana fiarovana ary mamela ny fitahirizana entana haingana kokoa sy marina kokoa.
◆ Ampitomboy ny fahombiazan'ny asa
Fahombiazana miasa avo, fanasokajiana mandeha ho azy, fitahirizana.Fomba fiasa malefaka, ny fomba fidirana entana dia mety ho FIFO na FILO, izay mampihena be ny fotoana fiandrasana.
◆Fampiasana toerana avo
Ny lalantsara forklift dia mihena raha ampitahaina amin'ny karazana racks hafa, ny famolavolana manokana dia mety hahatratra ny fitehirizana avo indrindra.
1. Apetraho eo amin'ny lalamby.
2. Tsindrio ny bokotra inbound remote control.
3. Mampiakatra ny pallet ny Shuttle, mandroso mankany amin'ny toerana lalina indrindra, mametraka ny pallet.
4. Miverena eny aloha amin'ny asa vaovao.
Operation - Mivoaka
Ny Shuttle dia manatanteraka hetsika mitovy amin'ny filaharana mifamadika.
Toerana fitehirizana trano fitehirizana Hala____mm ​​x Sakany____mm ​​x Haavo mazava___mm
Toeram-baravaran'ny trano fanatobiana entana ho an'ny entana sy fampidinana entana
Forklift kely indrindra ny sakan'ny lalantsara_____;Haavo ambony ambony _____
Fahombiazana miditra sy mivoaka: Habetsan'ny Pallets isan'ora_____.
Ny shuttle dia hotsapaina alohan'ny fanaterana.Ny injeniera dia afaka mitsapa ny fiara fitaterana an-toerana na an-tserasera.
Warranty iray taona.Valiny haingana ao anatin'ny 24 ora ho an'ny mpanjifa any ivelany.Andramo aloha an-tserasera ary amboary, raha tsy afaka manamboatra an-tserasera, ny injeniera dia handeha hamaha ny olana eo an-toerana.Ny piesy maimaim-poana dia homena mandritra ny fotoana fiantohana.
teo aloha: Multi Shuttle
Manaraka: Shuttle Mover
Conveyor, Carton Live, Shuttle amin'ny lalana efatra, Asrs Storage, Drive amin'ny Racking, Baby Shuttle,